လိင် Yiffy ဂိမ်းများ–အွန်လိုင်းလိင်ဂိမ်းများအခမဲ့
လိင် Yiffy ဂိမ်းဆောင်ခဲ့သည်ကိုသင်အများကြီးဇင်စေနိုင်သည်ဂိမ်း
ကျွန်တော်သိသောသင်တို့အကြားဖူးတယ်ကြောင်းလိင်ဂိမ်းများ။ သို့သော်သင်သည်အစဉ်အဆက်ကစား? သငျသညျအစဉျအပေါ်ဆိုက်သိအကောင်းဆုံးအကြောင်းအရာနဲ့ဘယ်လိုစုစည်းဖို့ကောင်းတစ်ဦးအပြာစုဆောင်းရနိုင်အောင်အပျော်အပါးအတွက်အားလုံးသင့်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်? ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတိအကျသင်သည်အဘယ်သို့သောအရအစုဆောင်းခြင်းမှငါတို့၏ဆိုက်ကို၏။ ကျနော်တို့လာမယ့်အတူအကြီးမားဆုံးအစု၏ကစားရန်အခမဲ့လိင်ညစ်ညမ်းဂိမ်းများ၊အင်တာနက်ပေါ်မှာလည်းသေချာဖန်ဆင်းတော်ကြောင်းအရာအားလုံးစနစ်တကျအလုပ်လုပ်။, တိုင်းဂိမ်းစမ်းသပ်ပြီးခဲ့သည်၊မျိုးစုံပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်၊အောင်သေချာပါကစားသမားတွေကနေနှစ်ခုလုံးကွန်ပျူတာနဲ့မိုဘိုင်းမှာအအေးဆေးဆေးတွေ့နိုင်ပါသည်အတွက်စုဆောင်း။ တချိန်တည်းမှာ၊ကျွန်တော်တို့လာမယ့်အတူအကောင်းဆုံးအချို့ဂိမ်းများအတွက်အွန်လိုင်း sexperimentation။
ဆိုက်ဖန်တီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာကအားလုံးကိုဖုံးအုပ်အဓိကသေား၏ဤလောကအတွက်လိင်ညစ်ညမ်း။ သင်အရာအားလုံးကိုရ twinks အ jocks၊ရသရော်နှင့်အတူအပေါငျးတို့သအမျိုးမျိုးကိုနာမည်ကြီးဇာတ်ကောင်နှင့်ပင်အရွယ်ရောက်လိင်ဂိမ်းများအပေါ်ဤသည်ဆိုက်ကို။ အဆိုပါစိတ်ကြိုက်အတွက်ဒီဂိမ်းလည်းသင်ပြောင်းလဲစာနိုင်ရန်အတွက်ကိုက်ညီဖို့စိတ်ကူးယဉ်။ ရှိပါတယ်တောင်မှဂိမ်းအပေါ်ဆိုက်သည့်အတွက်သင်ဒီမှာကွဲပြားခြားနားသောနောက်ဆုံးတွင်အပေါ်အခြေခံပြီးရွေးချယ်မှုလုပ်။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်ဂိမ်းများလိမ့်မည်ဧကန်အမှန်အသင်အကြောင်းမေ့လျော့မဆိုအခမဲ့လိင်ပြွန်။, သင်ဖြစ်နိုင်၏အစိတ်အပိုင်းအပြာနှင့်အသင်သည်လည်းထိန်းချုပ်။ အဆိုပါဂိမ်းအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ကြသည်အသစ် HTML၅ ဆက္၊လက်ဝါးကပ်တိုင်ပလက်ဖောင်းဂိမ်းအပေါ်မည်သည့်ရာက္ဇာနှင့်မည်သည့်စက်ကိရိယာ၊အလျှင်အဘယ်သူမျှမနေပါစေဒါကြောင့်ပေါက်များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်၊MacOS၊iOS သို့မဟုတ်။
အခါသင်ရလိမ့်မယ်-ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်၊သင်သိမည်မဟုတ်အားကစားစတင်။ ကျနော်တို့ဤမျှလောက်များစွာသောဂိမ်းနှင့်မှတဆင့်သွားသူတို့ပထမဦးဆုံးမှာခဲယဉ်းထင်။ ဒါပေမယ့်သည့်အခါသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူလာအတူရာက္ဇာကိရိယာများအပေါ်မည်သည့်လိင်ပြွန်၊သင်သိလာပါလိမ့်မယ်။အမှန်တွင်သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အမှန်ဂိမ်းအဘို့အသင့်ဝမ်းထဲတွင်စက္ကန့်။ ရှိပါတယ်နှင့်ကဏ္ဍအပေါ်ဆိုက်၊အဆိုပါဂိမ်းနှင့်အတူလာဖော်ပြချက်နှင့်ပင်ရှိပါသည်လှန်တာက်ရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုအတွက်။
တချို့ကလူကြိုက်အများဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်သေားကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါ POV၊လိင်၊စာမျက်နှာများ simulators၊အသင်ျလိင်ဂိမ်းများနှင့်လိင်ချိန်းတွေ့။ အရော်အမျိုးအစားကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်အလာနှင့်အတူဒါကြောင့်အများအပြား spoofs အတွက်ကာတွန်း၊ရုပ်ရှင်၊ဇာတ်လမ်းတွဲ၊နှင့်ပင်တြန္း။ သင်ကကစားနိုင်ပါတယ်ညဦးလိင်ညစ်ညမ်းဂိမ်းများ၊ကျနော်တို့တောင်မှအများကြီးရှိသည်က်ား bender ဂိမ်း၊အရာအတွက်အ ponies သို့လှည့်ကြသည်ယောက်ျားတွေနှင့်သူတို့မင်းအသီးအသီးအခြားအတွက်အမြည်း။
ကြောင်း၏ထိပ်တွင်၊ငါတို့သည်လည်းလာနှင့်အတူဂိမ်းအတွက်နိုငျသောအတွေ့အကြုံ erotica ဝတ္ထုအတွင်းကနေဇာတ်လမ်း။ သူတို့ဟုခေါ်ကြသည်စာသား-အခြေပြုဂိမ်းမှာအံ့သြလိမ့်မည်ဘယ်လောက်ကြောက်မက်ဘွယ်။ အပြန်အလှန်ဂိမ်းနှင့်အတူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှုပ်ထွေးကြောင်းခပ်သိမ်းသောလူအတက်အဆုံးသတ်မည်အမျိုးမျိုးအဆုံးသတ်ရေး၊အပေါ်အခြေခံပြီးအားလုံးသောရွေးချယ်မှုကိုသူလမ်းတစ်လျှောက်ကိုဖန်ဆင်းအ။ နှင့်များစွာသောအခြားဂိမ်းများသင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားဖြင့်သာကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်း။ တခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိစောင့်ရှောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆောင်သစ်ဂိမ်းနီးပါးခပ်သိမ်းသောတစ်ခုတည်းအပတ်က။
အခမဲ့အတွေ့အကြုံအပေါ်လိင် Yiffy ဂိမ်းများသည်အမှန်တကယ်အခမဲ့
အခါကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအမှုဆိုက်၊ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသိထားကိုရွေးဖို့၊ကြော်ငြာအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စျေးကွက်ပေါင်းစည်းမှု။ ကျနော်တို့နှင့်အတူအကြီးမားတဲ့ကုမ္ပဏီ၊အရာပေးဆောင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းသောပိုက်ဆံအနည်းငယ်နဖူးစည်းစာတမ်းတွေကျနော်တို့သူတို့ကိုပေါ်တွင်တင်။ တချိန်တည်းမှာကတည်းက၊သူတို့တစ်တွေကြီးမားကုန်အမှတ်တံဆိပ်များမှာ၊သူတို့မလိုချင်ကြဘူးအတွဲနှင့်ကိုယ် unskippable ဗီဒီယိုကြော်ငြာတွေသို့မဟုတ်ပေါ်လာပါတယ်။ အခြေခံအားဖြင့်၊အနည်းငယ်ကြော်ငြာတွေအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်မှာထက်အခြားမည်သည့်အရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းကစားပလက်ဖောင်း။ ကျနော်တို့ဘယ်တော့မှအဘို့အသင်မေးပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်ရှေ့တော်၌သင်တို့ကိုဤဂိမ်း။, ကျနော်တို့ကသင်မေးကိုအတည်ပြုရန်သင့်အသက်အရွယ်၊ဒါပေမဲ့မယ့်အထိခိုက်မခံသတင်းအချက်အလက်နှင့်ငါတို့သည်ပညတ်တရားအားဖြင့်လိုအပ်။ ဒါပေမယ့်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်အသက္ ၁၈၊သင်ပျော်မွေ့အမာခံလိင်တူဂိမ်းကစားနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမအနှောက်အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်။